यी ३ राशिहरु माथि भागवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा !“ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/यी ३ राशिहरु माथि भागवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा !“ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस !
यी ३ राशिहरु माथि भागवान शिवले राख्छन सबै भन्दा बढी कृपा !“ॐ” लेखी शेयर गर्नुहोस !
वृष राशि : यस राशिको जातलाई मंगल एकदम राम्रो मानिन्छ । वृष राशिको मानिस भगवान शिवको स्वरूपको निकै नजिक हुन्छन । यस राशिको मानिस चाहे दुखमा होस वा सुखमा सधै भगवानको जप गर्ने गर्छन जसकारण भगवान शिव यिनीहरुको हरेक कामना पुरा गर्ने गर्छन । यस राशिका व्यक्ति सोमबार शिव मन्दिर गएर शिवलिंगमा जल चढाउनु निकै शुभ मानिन्छ ।
कर्कट राशि : वृष राशि पछि कर्कट राशि माथि भगवान शिव निकै खुशी हुन्छन र आफ्नो कृपा पनि बर्साउछन । यस राशिको मानिस शिवको भक्तिमा सधै तलिन रहन्छन । यस राशिको मानिस भगवान शंखरको कुनै पनि व्रत वा चाडपर्वमा व्रत राख्न छोड्दैनन । भगवान शिवको सधै यो राशि माथि कृपा रहने गर्छ ।
मकर राशि : मकर राशिका जात भएका व्यक्ति भगवान शिवको ज्यादा करिब हुन्छन । यस राशिमाथि आउन लागेको आपदलाई भगवान शिवले पन्छाउने गर्छन। यी राशि भएका व्यक्ति जीवनको हरेक उतार चढ़ावमा भगवान शिवको नाम लिन भुल्दैनन । यसकारण भगवान शिव यी राशिमाथि आफ्नो कृपा बर्साउछन । सोमवारको दिन शिवलिंगमाथि दूध चढाउनाले यी राशिलाई एकदम फाईदाजनक हुनेछ ।
टाउकोमा गोली लागेका प्रहरीको मृत्यु
चीनमा ६ महिनाअघि मृत्यु भएका नेपालीको शव न‍ेपाल पठाइयो
एकाबिहानै डर लाग्ने गरी काठमाडौँका घर हल्लायो भूकम्पले, सर्वसाधारण सडकमा